UYesu nguThixo? Ingaba uYesu wakha wabanga ukuba unguThixo?
UYesu nguThixo? Ingaba uYesu wakha wabanga ukuba unguThixo?
Umbuzo: UYesu nguThixo? Ingaba uYesu wakha wabanga ukuba unguThixo?
Impendulo: UYesu akazange abhalwe kwibhayibhile ethetha ngqo lamagama, “NdinguThixo.” Lonto ayithethi ukuba akazange achaze ukuba unguThixo. Jonga lomzekelo wamazwi kaYesu ku Yohane 10:30, “Mna nobawo sibanye.” Kufanele ukuba sijonge inyathelo lamaJuda kwintetho yakhe sazi ukuba wayebanga ukuba unguThixo. Bazama ukumxuluba ngamatye ngenxa yesisizathu. “… wena, mnyewu wendoda, ubanga ukuba unguThixo” (UYohane 10:33). AmaJuda ayeyazi kakuhle into uYesu wayeyibanga—ngokwaselukholweni. Qaphela ukuba UYesu wayengayikhanyeli into yokuba unguThixo. Xa uYesu wachaza ukuba, “Mna nobawo sibanye” (UYohane10:30), Wayesithi yena noyise badalwe ngokufanayo nangomoya. UYohane 8:58 ngomnye umzekelo. UYesu uyachaza ukuba, “Ndikuxelela inyaniso phambi kokuba u- Abraham azalwe, ndandikho!” Impendulo yamaJuda aweva lentetho yayikukuthatha amatye ambulale ngenxa yenkohlakalo, uMtheto womfanekiso owenziwe ngamatye amancinci (Mosaic) wabayalela ukuba benze oko (ILevitikus 24:15).
UYohane uphinda igqiqo yobuthixo bukaYesu: “uLizwi ekuye uThixo” waye “uLizwi wabayinyama” (UYohane 1:1, 14). Ezivesi ziyabonisa ngokucacileyo ukuba uYesu nguThixo ngokwasenyameni. Izenzo 20:28 ziyasixelela, “Yibani zizimvu zendlu kaThixo, athe wazithenga ngegazi lakhe.” Ngubani othenge indlu yecawe— icawe kaThixo—ngegazi lakhe? nguYesu Kristu. Izenzo 20:28 ziyachaza ukuba uThixo wayithenga indlu yakhe yecawe ngegazi lakhe. Ngoko ke, uYesu nguThixo!
UTomas umdisipile wathi kuye, “Nkosi yam, Thixo wam” (UYohane 20:28). UYesu khange amlungise. UTito 2:13 uyasikhuthaza ukuba silinde ukuza kuka Thixo wethu umhlanguli wethu, UYesu Kristu (ungajonga nakwabesibini oPetrosi ku 1:1). KumaHebhere 1:8, UBawo uchaza ngoYesu , “kodwa malunga nonyana Uthi, Itrone yakho, Owu Thixo, iyakuhlala ngonaphakade kanaphakade kwaye ubulungisa buyakuba yintonga yobukumkani bakho.” UBawo ubhekisa kuYesu njengo “Owu Thixo” into ebonisa ukuba uYesu ngenene nguThixo.
Kwizityhilelo, ingelosi iyalela umpostile uYohane ukuba makanqule uThixo kuphela (IziTyhilelo 19:10). Amaxesha amaninzi kwizibhalo ezingcwele uYesu uyadunyiswa (UMateyu 2:11, 14:33, 28:9, 17; Luka 24:52; uYohane 9:38). Akazange abakhalimele abantu ngokumdumisa. Ukuba uYesu yayingenguye uThixo, ngewayebaxelele abantu ukuba bangamdumisi njengoko isithunywa senzayo kwiziTyhilelo. Zininzi iivesi kwizibhalo ezingcwele ezixoxa ngobuthixo buka Yesu.
Esona sizathu sibalulekileyo sesokuba uYesu kufuneka abenguThixo kuba ukuba asingoThixo, ukufa kwakhe kuyakuba akonelanga ukuhlawula isigwebo zezono zehlabathi (owokuqala uYohane 2:2).Into edaliweyo, ebeyakuba uYesu uyiyo xa ebengengoThixo,ayinakukwazi ukuhlawula izingwebo ezingapheliyo zezono ezichasene noThixo ongapheliyo. NguThixo kuphela onokuhlawula esosigwebo singapheliyo. NguThixo kuphela onokuthatha izono zehlabathi (Eyesibini kwabaseKorinte 5:21), wafa, waze wavuka, ebonakalisa uloyiso lwakhe, ngaphezu kwesono nokufa.